४३ वर्ष अघि ३५०० सेयर किनेर भुले, अहिले मूल्य रु. २३१६.८ करोड पुग्दा दंग ! - Nepali in Australia
September 29, 2021 autherLeaveaComment on ४३ वर्ष अघि ३५०० सेयर किनेर भुले, अहिले मूल्य रु. २३१६.८ करोड पुग्दा दंग !
काठमाडौं : ‘भगवानले जब दिन्छन्, झोली भरेर दिन्छन्।’ यो भनाइ निकै प्रचलित छ। तर यसमा कमैले विश्वास गर्छन्। भारत केरलस्थित कोच्ची सहरका बाबु जर्ज बालावीको जीवनमा भने यो भनाइ सही साबित भएको छ। उनले ४३ वर्ष अघि एउटा कम्पनीको ३५०० कित्ता सेयर किनेर बिर्से। जसको आजको मूल्य भारु १४४८ करोड अर्थात २३१६.८ करोड नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ।
तर अहिले उक्त कम्पनीले उनलाई पैसा दिन चासो देखाएको छैन।७४ वर्षीय बाबु र उनको परिवारका सदस्य यो मुद्दा लिएर सेयर बजार नियामक सेबीको शरणमा पुगेका छन्। उनीहरुले सेबीमा उक्त कम्पनीको सेयर किनेको र अहिले कम्पनीले पैसा नदिन नमा नेको भन्दै उजुरी दिएका छन्। सेबीले न्याय दिलाउनेमा उनीहरु विश्वस्त छन्। बाबुले सन् १९७८ मा मेवाड आयल एन्ड जनरल मिल्स लिमिटेडको ३५०० कित्ता सेयर किनेका थिए।
त्यतिखेर राजस्थानको उदयपुरमा रहेको यो कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत थिएन। बाबु कम्पनीको २.८ स्टेक होल्डर थिए । त्यतिखेर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष पीपी सिंघल र बाबु साथी थिए । कम्पनी सूचीकृत नरहेको र लाभांश पनि वर्षौंसम्म नबाँडेका कारण बाबुले आफूले किनेको सेयर बिर्सिन पुगे। सन् २०१५ मा उनले उक्त कम्पनीको सेयर किनेर सम्झिएर र खोजबिन सुरु गरे।
खोज बिनका क्रममा बाबुले थाहा पाए कि कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर पीआई इन्डस्ट्रिज राखेको रहेछ र अहिले यो कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत रहेको छ । बाबुले आफ्नो सेयर डिम्याट अकाउन्टमा ल्याउनका लािग एउटा एजेन्सीको सम्पर्कमा पुगे । तर उक्त एजेन्सीले बाबुलाई कम्पनीमै सम्पर्क राख्न सुझाव दियो। उनीहरु उक्त कम्पनीमा पुगे। तर कम्पनीमा बाबुको नाममा हालै कुनै सेयर नभएको कर्मचारीहरुले बताए।
उनको नाममा भएको सेयर सन् १९८९ मा अरुलाई बेचिएको बाबुले पत्ता लगाए। बाबुले कम्पनीले आफ्नो सेयर नसोधी गैरकानुनी ढंगले बेचेको आरोप लगाएका छन्। कम्पनीले पनि बाबुले पेस गरेको सेयरसम्बन्धी कागजपत्र असली भएको पुष्टि गरेको छ। तर पैसा फिर्ता गर्न मानेको छैन। कम्पनीले यो मुद्दा मिलाउन बाबुलाई बोलाएको पनि थियो। तर आफू कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने भन्दै बाबु कम्पनीले बोलाउँदा पनि गएनन्। अब सेबीले नै यो मुद्दाको टुंगो लगाउनेमा बाबु विश्वस्त छन्। – एजेन्सी